Ogaden News Agency (ONA) – Xafiis Loogu Talagalay Qurba-joogta oo Addis Ababa Laga Furayo.
Xafiis Loogu Talagalay Qurba-joogta oo Addis Ababa Laga Furayo.
Posted by Dulmane	/ September 10, 2018
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in maamulka Abiy Axmed uu yagleelayo hay’ad cusub oo kashaqayn doonta arimaha dadka dalka dib ugu soolaabanaya.
War hor dhac ah oo kasoo baxay xafiiska Wasaarada Arimaha Dibada Itoobiya ayaa lagu sheegay in lasamaynayo hay’ad ama xafiis kashaqayn doona arimaha qurba-joogta, kaas oo sida hadalka loodhigay door muhiim ah kaqaadan doona soolaabashada qurba-joogta.
Warka ayaa intaas kudaraya in aan wali lamagacaabin dadkii xafiiskan kashaqayn lahaa isla markaana aan ladajinin qorshihii xafiiska, hase yeeshee waxaa afhayeenka Wasaarada Arimaha Dibada Itoobiya Meles Alamu ayaa sheegay in si dag dag ah loo dhamaystiri doono qorshayaasha xafiiska qurba-joogta.
Sida aan lasocono waxaa wadanka Itoobiya dibada uga maqan kumanaan qof oo qoxooti ku ah wadamada shisheeye kuwaas oo kacararay gacantii birta ahayd ee maamuladii hore ee wadanka Soomaray, kuwaas oo dadkii kala eryay.
Maamulka cusub ee Itoobiya oo kacdoon shacab kuyimid ayaa balan qaaday in ay waxkabadali doonaan qorshayaashii maamuladii hore ee Itoobiya, waxayna kudhawaaqeen nabad galiyo iyo in lala hadli doono cidkasta oo wax tabanaysa.